Nhau dzeBhaibheri: Jesu Anodzidzisa Pagomo - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Ona Jesu agere pano. Ari kudzidzisa ava vanhu vose pagomo muGarirea. Avo vagere pedyosa naye vadzidzi vake. Asarudza 12 vavo kuva vaapostora. Vaapostora ndivo vadzidzi chaivo vaJesu. Unoziva mazita avo here?
Pana Simoni Petro nomunin'ina wake Andrea. Tevere pana vana Jakobho naJohane, vari hamawo. Mumwe muapostora anonziwo Jakobho, nomumwewo anonzi Simoni. Vaapostora vairi vanonzi Judhasi. Mumwe wacho ndiJudhasi Iskarioti, uye mumwe Judhasi anonziwo Tadheu. Tevere pana vana Firipo naNatanaeri (anonziwo Bhartoromeo), naMateo naTomasi.
Vadzoka kubva Samaria, Jesu akavamba kuparidza kwenguva yokutanga achiti: 'Umambo hwamatenga hwava pedyo.' Unoziva chiri umambo here? Ihurumende chaiyo yaMwari. Jesu ndiye mambo wayo. Achabata ushe ari kudenga ndokuunza rugare kupasi. Pasi rose richashandurwa kuva paradhiso yakaisvonaka noumambo hwaMwari.
Jesu pano ari kudzidzisa vanhu pamsoro poumambo. Jesu anotsanangura kuti: 'Munofanira kunyengetera kudai.’ ‘Baba vedu vari mudenga, zita renyu ngarikudzwe. Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano, sezvakunoitwa mudenga.' Vanhu vazhinji vanoidza uyu kuti 'Munyengetero Washe.' Vamwe vanouti 'Baba Vedu.' Ungataura munyengetero wose here?
Jesu ari kudzidzisawo vanhu kuti vanofanira kubatana sei. Anoti: 'Itirai vamwe zvamunoda kuti vakuitireiwo.' Hamuzati muchikuda here apo vamwe vanokubatai nomutsa? Nokudaro Jesu ari kuti, tinofanira kubata vamwe vanhu nomutsa. Hakuzovi kunoshamisa here muparadhiso yapasi pano apo munhu ari wose achaita izvi?
Mateo ganhuro 5 kusvikira ku-7; 10:1-4.
Mumufananidzo, Jesu ari kudzidzisa ari kupi, uye ndivanaani vagere pedyo zvikuru naye?
Vaapostora 12 vanonzi vanaani?
Umambo huri kuparidzirwa nezvahwo naJesu chii?
Jesu anodzidzisa vanhu kunyengetererei?
Jesu anoti vanhu vanofanira kubatana sei?
Verenga Mateo 5:1-12.
Tingaratidza munzira dzipi kuti tinoziva zvinodiwa zvedu zvomudzimu? (Mat. 5:3; VaR. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)
Verenga Mateo 5:21-26.
Mateo 5:23, 24 inosimbisa sei kuti ukama hwedu nehama dzedu hune zvahunoita paukama hwedu naJehovha? (Mat. 6:14, 15; Pis. 133:1; VaK. 3:13; 1 Joh. 4:20)
Verenga Mateo 6:1-8.
VaKristu vanofanira kudzivisa mamwe marudzi api okuzviruramisa? (Ruka 18:11, 12; 1 VaK. 4:6, 7; 2 VaK. 9:7)
Verenga Mateo 6:25-34.
Jesu akadzidzisei pamusoro pokudiwa kwokuvimba naJehovha kuti atipe zvinhu zvatinoda? (Eks. 16:4; Pis. 37:25; VaF. 4:6)
Verenga Mateo 7:1-11.
Muenzaniso wakajeka uri pana Mateo 7:5 unotidzidzisei? (Zvir. 26:12; VaR. 2:1; 14:10; Jak. 4:11, 12)
Wana tsanangudzo dzepfungwa huru dzemumharidzo yaJesu.